U-Huawei akakuhlehlisanga ukumiliselwa kwe-Mate X | I-Androidsis
Hayi, uHuawei akakuhlehlisanga ukumiliselwa kwe-Mate X
Kukho amarhe okuba uHuawei ukuhlehlisile ukumiselwa kwe-smartphone esongelayo Umtshato X ukuya ku-Septemba, kodwa iingcali ziveze ukuba ayiyonyani le.
Ukuhleba malunga nokuhlehliswa kwe-Mate X kunokuba kuvele ngenxa yeengxaki Samsung Galaxy Fold, mhlawumbi njengendlela yokuqhubeka nokuvavanya isixhobo ngaphambi kokumiliselwa. Nangona kunjalo, Iingcali ziveze ukuba iHuawei iya kubambelela kwishedyuli yayo yokwazisa.
Umlingani X yifowuni yokuqala esongwayo kaHuawei eya kubhengezwa kumsitho wangaphambi kwe-MWC 2019 e-Barcelona. Isixhobo, ngokungafaniyo nembangi yayo, iGolden Fold, isonga ngaphandle kunokuba ingene ngaphakathi. Ekusungulweni, iHuawei, ethi ugxeke uyilo lweselfowuni yaseMzantsi Korea, utshilo i-terminal iya kubakho ukuthengwa phakathi enyakeni.
I-Samsung Galaxy Fold vs Huawei Mate X
Ekuqaleni kwale nyanga iselfowuni yadweliswa kwivenkile esemthethweni ye-intanethi kwaye uluhlu lwabonisa oko iya kufumaneka ngoJuni. Isamsung, kwelinye icala, sele ithumele iiyunithi zokujonga kwakhona kwi-YouTubers kunye neebhloko zeetekhnoloji. Nangona kunjalo, usuku nje olunye emva kokusetyenziswa, bekukho iingxelo zezikrini ezonakalisiweyo.
Umlingani X unesikrini esikhulu esiguqukayo se-8-intshi esine-FullHD + isisombululo se-2,480 x 2,200. Isongele kwifowuni enesikrini esizi-intshi ezi-6.6 kwelinye icala kunye nescreen esine-intshi ezingama-6.38 kwelinye icala. Inikwe amandla yi Kirin 980, edityaniswe ne-8GB ye-RAM kunye ne-512GB yendawo yokugcina eyandisiweyo.
Ngenxa yoyilo lwayo, iikhamera zangasemva ezintathu zeMate X (40 MP + 16 MP + 8 MP) ziyasebenza njengeekhamera zayo zangaphambili. Isixhobo sinefayile ye- Imodem eyiBalong 5000 ngaphakathi, oko kuthetha ukuba ixhasa iinethiwekhi ze5G. Ikwabandakanya ibhetri yamandla angama-4,500 mAh ngenkxaso ye-55 W yetekhnoloji yokutshaja ngokukhawuleza.
I-Galaxy Fold vs Huawei Mate X: iikhonsepthi ezimbini ezahlukeneyo zenjongo enye
U-Huawei ubeke ifayile ye Ixabiso lentengo le-2,299 euros (~ $ 2,607 malunga) kwi-Mate X. Izakuba semthethweni ezivenkileni kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Hayi, uHuawei akakuhlehlisanga ukumiliselwa kwe-Mate X